Mauricio Pochettino Oo Saadaaliyey Kulanka Manchester United iyo Barcelona – Kooxdee Ayuu Tilmaamay Inay Guuleysan Doonto? – Latest Sports News
Mauricio Pochettino Oo Saadaaliyey Kulanka Manchester United iyo Barcelona – Kooxdee Ayuu Tilmaamay Inay Guuleysan Doonto?
Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa ka hadlay ciyaarta tartanka Champions League ay ku kulmi doonaan kooxaha Manchester United iyo Barcelona oo isku beegmay wareegga siddeed dhamaadka.
Manchester United oo si cajiib ah usoo garaacday PSG ayaa timid wareegga siddeeda, waxaana ay wada ciyaari doonaan Barcelona oo iyaduna soo tuntay Lyon.
Kooxda uu hoggaamiyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa 19 kulan oo ay ciyaartay waxay guuleysatay 14 ka mid ah tan iyo badhtamaha bishii December markii shaqada laga caydhiyey Jose Mourinho.
Haddaba tababaraha Tottenham oo ay kooxdiisu la ciyaari doonto Manchester City, ayaa waxa uu ka hadlay kulanka Manchester United iyo Barcelona, waxaana uu sheegay in Barcelona ay guuleysan doonto oo ay leedahay awood ay markeedii lixaad ku qaadato tartanka Champions League.
“Haddii ay jirto cid loo saadaalinayo inay ku guuleysanayso Champions League waa Barcelona. Valverde shaqo wanaagsan ayuu qabanayaa, ciyaartoyguna waxay ku joogaan heer cajiib ah, ugu dambayntana waxay haystaan Lionel Messi.” Sidaas ayuu yidhi Pochettino.
“Waxay ila tahay in kooxda Manchester United ay dhismaysay sannadihii ugu dambeeyey, loona dhisayayay inay ku guuleysato wax weyn, laakiin Barcelona ayaa hal tallaabo ka horreysa Manchester United.” Ayuu ku daray.
Sidoo kale waxa uu Pochettino ka hadlay kulanka ay Tottenham la ciyaari doonto Manchester City ee wareegga siddeed dhamaadka Champions League, waxaana uu amaanay awoodda kooxda uu ka hor tegayo.
“Way iska caddahay in Manchester City loo qaabeeyey guul ayna waajib ku tahay inay guuleysato. Waanu isku dayi doonaa inaanu la tartano. Waanu ognahay in tartamada gaagaaban ay muhiim tahay taam ahaanshaha ciyaartoygu. Waxaanu haysanaa dhiiranaantii, waxaananu yeelanay garoon cusub oo qaadaya 62,000 taageereyaal ah, taas ayaana tamar cajiib ah nasiin doonta.”
Tottenham ayaa garoonkeeda cusub u guuraysa ka hor kulanka Man City ee April 9 ee lugta koowaad ee wareegga 16-ka Champions League kaddib laba xili ciyaareed oo ay garoonka Wembley ku dheelaysay.